Tuesday November 23, 2021 - 03:12:57 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Wuxuu talada dalka la wareegay 2010 isagoo xiligaa oo uu 7sano kahor dhacay in badan oo ka horaysay
Wuxuu talada dalka la wareegay 2010 isagoo xiligaa oo uu 7sano kahor dhacay in badan oo ka horaysay mucaarid ahaa!
Wuxuu talada kalawareegay Udub mushahar ay bixiso iska daayee raashinkii ciidanka cirka galay( bankrupt)
Sagxada iyadoo la joogo baa Kulmiye oo Siilaanyo Mwayne u noqday yimi wacdaro iyo sumulo dhigay oo dharyahaa dabka lagu dhardhaaray xawaare aan caadi ahayn uu ku kaxeeyey oo mucaarid iyo muxaafidba qireen in kabaha la subkaday!
Waxaan odhankaraa waa sababta maanta hadii Xukuumada M/wayne Muse ay Malab shubto aanay u muuqanayn iyadoo aynu og nahay inaanu u yaraysan!
Waxaa waliba u dheeraa M/wayne Muse ama ku bilaabmay 4sano colaad dhaqaale oo dabadeed ama dowladaha jaarkaa iyo colaad lokal ahoo lagala horyimi oo kaga imanaysay muraacid gudaha inkastoo uu Siilanyo colaadaha qaar kala mid ahaa,
Hadana isaga durufihii siyaasadeed ee adkaa ee geeska kasoo kacay ee uu sida geesinamada leh uga dabaashay mucaaridkii oo aqbaliwaayay natiijadii doorashada oo waliba isna weheliyay Coved19 ilaa maanta lala dhutinaayo!
Waxaan odhan karnaa inuu waxaas odhan kaga jawaabay inay Somaliland ahaato mid wanaagsan in uu kuwii mucaaridka ku ahaa uu iyagii haldheeriga siyaayay haday mashaariic tahay iyo haday maslaxaad kale tahayba!
Haatan iyo dan waxaynu wada og nahay in doorashooyinka Somaliland soo dhow yihiin M/wayne Musens nin ku dhiiran yahay oo dhaqaalona galiya markaa taageerayaasha iyo shacabka imikaba in badan oo iyaga ka mid ahi aaminsan tahay in Kulmiye iyo Murashaxiisu dhacaayo 8 subaxnimo sidee bay kula tahay in looga dhaadhicinaayo haday isrogto!
Abdirahman Ciro iyadoo cadahay cod badan lagaga badiyay uu isla keen soo hortaagay dalkan baan u tanaasulay ee Muuse Biihi uma tanaasulin,
Imikaba anigu waxaan qabaa yaan aad loo ruxin Soda.
Wabilahi towfiiq Mustafe A Garas